छक्का पञ्जाबाट डेब्यू गरेकी यि सुन्दरी नायिका सुपुष्पा अहिले के गर्दैछिन् ? « OSBreak
छक्का पञ्जाबाट डेब्यू गरेकी यि सुन्दरी नायिका सुपुष्पा अहिले के गर्दैछिन् ?
काठमाडौँ- नायिका सुपुष्पा भट्टले अभिनयका लागि लिड भूमिका नै आवश्यक नरहेको बताउकी छन् । सहायक भूमिकामै चित्त बुझाइरहेकी उनले ‘हिरोइन नै बन्ने हो तर यसका लागी लिड भूमिका नै हुनुपर्छ भन्ने आफुलाई नलागेको बताएकी छन् ।
फिल्म ‘रणवीरुबाट डेब्यू गरेकी उनी तेस्रो फिल्मसम्म आइपुग्दा उनी सहायक भूमिकामा नै देखिँदैछन् । उनले अभिनय गरेको तेस्रो फिल्म ‘चपली हाइट ३’मा उनी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कासँग साहयक भूमिकामा देखिँदैछिन् ।
लगातार तीन फिल्म गरिरहँदा पनि कसैले उनलाई लिड भूमिकामा लिइरहेका छैनन् । उनी आफ्‍नो हिरोइन बन्ने सपना साकार हुने प्रतीक्षामा छिन् ।डेब्यु फिल्म फ्लप भएपछि सुपुष्पा ‘छक्का पञ्जा ३’मा अनुबन्धित भएकी उनको छाटो भुमिका पनि अत्यन्तै मन पराइएको थियो ।सीए पढ्दै गरेकी सुपुष्पा पढाइ र अभिनयलाई सँगसँगै लिएर हिडेकी छन् ।